Mucheka shangu dzevakadzi
Muchando, ruvara rutsvuku runoratidzika zvakakosha. Ndokusaka vasikana vazhinji vanoedza kusiyanisa mari yavo yechando yakagadzirwa nejira jena, jasi, jasi kana, taura, tambo. Chimwe chinhu chemuvara uyu, iyo ino nguva yakave yakakurumbira nevakadzi vakawanda vefashoni - shangu. Ndizvo zvazvo zvatichataura pamusoro penyaya ino.
Ndiani achakwanisa shangu shangu chena?
Kutanga, rangarira kuti shangu dzakachena (kunyanya mienzaniso yakasimba chete) dzichaita kuti iwe uoneke pasi, saka izvi zvinotarisirwa kuti vasikana vaduku, uye kune avo vanoda kutarisa zvishoma.
Uyewo, shangu tsvuku hazvikwanise kukodzera muvharobhe yevateki vezvokupfeka zvekare. Asi vanoda vemifananidzo yakaipisisa, vachitsvaka kukoshesa vanhu vose, vachakoshesa mhando dzakasiyana-siyana dzehombodo tsvuku.
Nekupi kupfeka shangu dzachena?
Kana uchida kuedza nekugadzira mifananidzo mitsva, edza kubatanidza shangu dzakadaro nemabhurukwe akajeka (semuenzaniso, mumugodhi kana mumatsetse emukati), tight-fitting patterned jeans uye shati isina kushambadzira kana jira. Muchiitiko ichi, zviri nani kupa zvakasarudzwa kwete zvemuchena-machena mabhoti, asi kumashikiti kana mabheji, asingagoni kusiyanisa zvakanyanya nemamwe mavara.
Vasikana vanosarudza mapikicha uye akadzikama, unogona kukurudzira kubatanidza vhudzi vemachando ezvidzimai zvevakadzi nehuni inopisa kana yebhuruu leggings uye yakasununguka inopisa mhepo.
Gadzira chinhu chinonakidza uye chiduku chisingadiki chichakubatsira iwe shangu dzvuku uye dhena. Yakanyatsojeka uye yakasvibirira, inotarisa yakabatana pamwe nejasi uye yakasvibirira mabheji akaoma. Kunyanya kujeka uye kufadza chifananidzo ichi chichatarisa, chichigadziriswa nemashandi emhando dzakanaka, somuenzaniso, burgundy kana emerald bag kana bhandi.
Membrane jacket - zvinoreva jekete rakagadzirwa nemumakumbo mishonga, chii chaunofanira kupfeka pasi payo?
Shirt ine micheka shoma
Ladies Park Didrikson
Mhemberero dzezhizha dzevakadzi pahurefu hwakazara
Jacket Yakadzika Yakadzika
Anotsika kusvika kumakumbo akazara
Shish kebab muvhiniga
Zvakanaka sei kutakura mapapiro?
Shiraplant - koriori zvayo
Tincture ye calamus uye calendula nokuda kwemaziso
Ravi raLaurel mumishonga yevanhu
Roland Emmerich akapa hurukuro pamusi wekutanga we "Independence Day: Revival"
Nzira yekuvandudza sei kunyora?
Ngwe-Saung kana Ngapali?
Shorts uye T-shirt
Mask for hair ne pepper
Kushandiswa kwemishonga ndiyo inowanzoenderana nezera
Ko ramba rorota rini?
Rimwe ramufu rukuru kune rumwe
Muchidimbu polyhydramnios panguva yekuzvitakura
Lunar Diet - chikafu chezvikamu zve mwedzi kuti uwedzere kurasikirwa
Lady Gaga naK Taylor Kinney vakashambidza mumvura yechando
Flowers of oak
Mvere dzvudzi dze gray-green meso